Huawei Mate X: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah | Androidsis
Dhowr usbuuc ka hor Huawei wuxuu xaqiijiyay joogitaankiisa MWC 2019, xagee ay ku lahaayeen munaasabad soo bandhigid ah. Nooca Shiinaha waa mid ka mid ah waxyaabaha soo jiidashada leh ee ka dhaca magaalada Barcelona. Sida war badan ayaa lagaa sugayaa, inkasta oo uu jiro aalad dhalisa dano gaar ah, taas oo ah qaabkeeda isku laaban. Huawei Mate X, oo ugu dambeyntii si rasmi ah looga dhigay munaasabadda.
Shalay uun ayaa magaca aaladda la shaaciyay, mahadsanid boodhadh. In kasta oo aysan ahayn illaa munaasabaddan soo-bandhigidda markii aan awoodnay inaan ogaanno faahfaahin gaar ah oo ku saabsan taleefanka casriga ah. Waxaan horeyba u ogaanay tan Huawei Mate X, kaas oo dhaca dhawr maalmood ka dib Samsung Galaxy Fold.
Muddo bilo ah ayay iska caddahay in taleefannada gacanta ee isku laaban ay ka mid noqon doonaan isbeddellada waaweyn ee sanadkan. Hadda, toddobaad gudihiis waxaan haysannaa laba ka mid ah moodooyinka ugu muhiimsan qaybtan. Waxa xiisaha leh ee ku saabsan tan Huawei Mate X waa astaantaas sharad shaashad isku laaban oo ka duwan tan Samsung.
Tani waa wax kuu oggolaanaya inaad haysato qalab ka duwan kan ay calaamadda Kuuriya soo bandhigtay maalmo ka hor. Maxaa intaa ka badan, wuxuu u taagan yahay gaar ahaan inuu aad u fiicanyahay, wax shaki la'aan ah guul muhiim u ah aaladda noocan ah. Sidaa darteed waxaan ka helnay fikrad ka duwan, mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan xaalad kasta.
1 Caddaymaha Huawei Mate X
2 Huawei Mate X: Cusbooneysiin ahaan astaan
Caddaymaha Huawei Mate X
Sida la filayo, heer farsamo ahaan waxaan ka sarreeynaa dhammaan qaybaha ugu sarreeya. Nooca Shiinaha ayaa nooga tagaya qalab aad u dhameystiran. Soo bandhigiddooda waxay doonayeen inay xoogga saaraan hal-abuurnimada naqshadeynta, laakiin iyadoon la rabin in la dayaco qeexitaannada ay naga tegeyso. Marka waa iskudhaf muhiim ah qalabkan. Intaas waxaa sii dheer, sidii horeyba looga faallooday bilahaan, sidoo kale waa taleefanka ugu horreeya ee 5G. Faahfaahinteeda buuxda waa:
Faahfaahinta farsamada Huawei Mate X
Tusaale Mate X
Nidaamka hawlgalka Android 9.0 Pie oo leh EMUI 9 lakab ahaan
Screen 8 Inch oo leh xallinta 3120 x 1440 pixels (6.39 inji laabma iyo 6.6 inji oo isku laab laaban)
Gacaliye Kirin 980 oo leh Balong 5000 sida modem
Kaydinta gudaha 512 GB
Kaamirada gadaal 40 MP xagal ballaaran + 16 MP xagal ballaadhan + 8 MP telephoto
Kaamirada hore Ma jiro kamarad hore
Xuduudaha kala duwan 5G Dual Sim Bluetooth 5.0 WiFi 802.11a / b / g / n / ac USB-C
Tilmaamo kale NFC Sawirka faraha ee dhinaca
Batariga 4.500 Mah oo leh 55W Huawei SuperCharge
Cabbirada Dhumucdiisuna 11mm duubnaatay (5.49mm furmay)
Qiimaha 2299 euros
Huawei wuu ogyahay waxa uu ku sameeyo taleefankan. Astaantu waxay galeysaa qeybta shaashadda isku laaban ee moodalkan, oo leh shaashad 8-inji ah. Marka la laabo, noqda taleefoon casri ah oo 6,39 inji ah, oo leh shaashad labaad oo ah taageerada dhinaca dambe ee qalabka. Sidaan soo sheegnay, dhumucdu waa qodob muhiim u ah qalabka. Aad ayey u khafiifsan tahay noocyada taleefannada.
Markay soo shaac baxdo, Huawei Mate X kan ayaa nooga tagaya shaashad 8-inji ah. Shaashadan kama helayno qashin, dalool ama wax kale. Sidaa darteed, haddii si buuxda loo hawlgeliyo, kama haysanno kamarad hore qalabka. Marka hore waa inaad isku laabtaa si aad ugu soo noqotid qaabka loo yaqaan telefoonka. Kaamirooyinka gadaal ee qalabka waxaa loo isticmaalaa iswadayaal isku mid ah.
Huawei Mate X: Cusbooneysiin ahaan astaan
Shaki la'aan, nidaamka isku laabanku wuxuu ahaa wax muhiim u ah taleefankan casriga ah. Waxay leedahay ilaa 100 qaybood waxayna ubaahantahay seddex sano oo horumarineed, si loo hubiyo in qalabku isku laalaaban karo, isagoon waxyeello u geysan shaashadda. Marka laalaabo, waxaan leenahay a 11 milimitir qaro weyn oo kaliya 5,49 milimitir furmay. Runtii waa kufiican tahay arrintan, taas oo shaki la'aan caqabad ku noqotay shirkadda.
Shaashadda weyn ee Huawei Mate X waxay bixisaa faa'iidooyin badan. Astaantu waxay muujineysaa inay fududahay in la akhriyo, iyo sidoo kale inay ku habboon tahay daawashada fiidiyowyada ku yaal. Waxay sidoo kale doonayeen inay ku nuuxnuuxsadaan codsiyada wax soosaarka soo bandhiga qalabka. Intaa waxaa dheer, dadka isticmaala waxaa la siiyaa awood ay ku ku shaqee qaab shaashad kala qaybsan, taas oo u oggolaanaysa nus kasta oo shaashadda ah in loo isticmaalo shaashad gaar ah barnaamijyada qaarkood. Sidaa darteed, sidoo kale waa tusaale wanaagsan in lala shaqeeyo.
Dhinaca kale, waa taleefankii ugu horreeyay ee sumadda leh 5G. Waayo, isticmaal modka Balong 5000 in Huawei soo bandhigtay dhowr toddobaad ka hor. Ka processor ahaan, waxay isticmaashaa Kirin 980, oo ah kan ugu awoodda badan ee shirkaddu xilligan gacanta ku hayso. Isku mid ah oo aan ku hayno Mate 20 iyo 20 Pro ee astaanta. Modemkan ayaa mas'uul ka ah bixinta aaladda xawaare aad u weyn, illaa 4,6 Gbps soo dejiso. In kastoo ay ku xirnaan doonto dhulka. Laakiin shirkadda ayaa sheegtay in tan Huawei Mate X wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku soo dejiso filim 3 GB ah 1 ilbidhiqsi oo keliya.
Waxay ku timid batari awood leh 4.500 Mah. Laakiin macquul ahaan ugu cajiibka badan waa lacagteeda dhakhsaha badan, 55W. Waa lacagta ugu dhaqsaha badan uguna awoodda badan suuqa marka laga hadlayo arrintan. Sida shirkaddu ku sheegtay bandhigga, taleefanka waxaa lagu soo dalici karaa 85% 30 daqiiqo gudahood. Lacagtan degdegga ahi waxay hoos timaaddaa magaca Huawei SuperCharge.
Marka tilmaamaha Huawei Mate X la yaqaan, waxaa la joogaa waqtigii la ogaan lahaa goorta aan filan karno inay timaado dukaanka, marka lagu daro qiimaha ay yeelan doonto. Haddii aaladda Samsung ay dad badan kaga niyad jabtay qiimaheeda sare, weli waa la arki doonaa nooca Shiinaha
Waa hagaag, kiiskan, layaabka ayaa hubaal ka weynaan doona adeegsadayaal badan. Maaddaama qiimaha Huawei Mate X uu ka sarreeyo waxa aan ka helno aaladda Samsung. Sida lagu arkay soo bandhigida aaladda, waxay la imaan doontaa nooc leh 8 GB oo RAM ah iyo 512 GB oo keyd gudaha ah, qiimo dhan 2.299 euro.
Marka la sii daayo, la filayo inay ka bilaabaan dukaamada badhtamaha sanadkan. Taariikh cayiman lama cayimin, laga yaabee inay noqon doonto ilaa Juun. Laakiin waa inaan ka sugno waxoogaa xaqiijin shirkadda ah arrintan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei Mate X: Aaladda casriga ah ee isku laaban ee Huawei waa rasmi